Sida Loo Helo Natiijooyinka Raadinta ee Ganacsiga Deegaanka?
Local SEO waa doorashada ugu fiican ee shirkadaha yaryar iyo dhexdhexaad ah oo doonaya in ay koraan ganacsigooda ayna soo jiidaan macaamiisha badan. Qodobkani, waxaan ku qeexi doonaa nuxurka raadinta maxalliga ah. Sidoo kale, waxaan ka fekereynaa sida shirkadda SEO-ka ee deegaanka ay gacan uga geysan karto hagaajinta joogitaankaaga internetka - hosting gratis asp.net sql server.
Sidee baan ufilan karaa natiijooyinka raadinta maxaliga ah?
Raadinta raadinta maxalliga ah maaha mid adag sida mulkiileyaasha ganacsiyada intooda badani ay u malaynayaan. Maalmahan, way sahlan tahay ganacsiyada maxalliga ah inay la tartamaan shirkadaha waaweyn ee boosaska ugu sarreeya ee natiijooyinka raadinta marka loo eego laba sano ka hor. Halkan waa afar istaraatajiyadood oo ah inaad tixgeliso si aad u hagaajiso taxanahaaga raadinta degaankaaga:
Lahaanshaha natiijooyinka maxaliga ah ee Google
Sida caadiga ah, marka Google ama wax kasta oo kale waxay ogaaneysaa ujeedada raadinta maxaliga ah ee sheyga ama adeegga gaarka ah, waxay siisaa dadka isticmaala liiska gaaban ee ganacsiyada maxaliga ah ee ugu muhiimsan. Si aad u hesho liistada bogagga "Google doorbidayo", waa inaad horay u sii hagaajisid boggaaga hore ee Google-ka ee maxaliga ah. Sidaa darteed, abuurista liiska Google My Business oo aad ufududaynayso calaamad muhiim ah ee degaanka waa inuu ahaado mudnaantaada ugu sareysa. Hubso in ganacsigaadu uu helay calaamadda degaanka ee saxda ah goobtaada. Sidoo kale, hubso haddii faahfaahinta shirkaddaadu tahay 100% oo ka mid ah shabakadda.
In la yareeyo joogitaankaaga shabakada natiijooyinka raadinta maxaliga ah waxay kobcisaa aragtidaada liiska ku yaala xirmada maxaliga ah, kaas oo lagu soo bandhigayo su'aalaha raadinta maxalliga ah ee ku jira makiinadaha raadinta ee ugu sareeya.
Abuuritaanka Xuquuqda Isku-duuban
Codsiga labadaba PPC iyo SEO waa fikrad kale oo aad isticmaali karto si aad ula tartanto shirkadaha waaweyn ee natiijooyinka raadinta maxaliga ah. Waxaa la caddeeyey marar badan oo adeegsanaya raadinta lacag bixinta oo ay weheliyaan SEO-ga ayaa gaari kara natiijooyin aad u muhiim ah.
Xilliga olole raadinta lagu qaato, khabiiro fudud ayaa kugula talin doona in aad tijaabiso oo aad sare u qaaddo raadintaada lacagta ah ee ka soo horjeeda mugga ballaaran ee keywords keywords. Tani waxay gacan ka geysan doontaa wadidda gaadiidka tayada leh ee si guul leh ugu soo noqda bogga ama boggaga soo degaya. Waxyaabo badan, oo leh istiraatiijiyado isku dhafan oo lagu bixiyo iyo istaraatiijiga SEO, waxaad isticmaali kartaa fikrado muhiim ah oo ka tarjumaya labadaba dadaal si aad u wargelisid midba midka kale.
Abuuritaanka Muuqaalka Qodobka qiimaha leh ee gudaha
Sida ay yiraahdaan, content waa boqor. Markaad abuurayso oo daabacayso content boggaaga, noqo maqaallo, maqaalo blog, daraasad kiis, waraaqo caddaan ah ama warqad loogu talagalay fiidiyowyada faahfaahsan, hubi inay tahay mid wargelin ah. Tixgeli in aad ku dhejisid qoraalka dheeraadka ah iyo ereyada gaaban ee wax laga beddelay ee ku jira qoraalkaaga. Kuwa ugu horreeya waxay metelaan fursado ay ku helaan shabakado yaryar si ay uga cararaan kuwa ugu weyn ee raadinta halka content-ka gaarka ah ay si fiican u qabtaan ganacsiyada yaryar,. Daabacaadda si joogto ah ayaa lagula talinayaa.
Maalgashiga joogtada ah ee daabacaadda tayo sare leh, ujeedo fiican ayaa ah istaraatijiyad wanaagsan oo lagu caawinayo ganacsigaaga inuu helo aragti dheeraad ah. Kala-tashiga Xiriirka Dadwaynaha
Ka sokow horumarinta macluumaadka deegaanka ee ku saabsan boggaaga, waxaad kordhin kartaa muuqaalka interneetka shirkadaada ee shirkadda adigoo isdhaafinaya istaraatiijiga PR-ga iyada oo la adeegsanayo habka muhiimka ah. Wadashaqeyn lala yeesho warbaahinta maxaliga ah ee la aaminsan yahay waxay faa'iido u leedahay dhammaan shirkadaha waaweyn. Farsamooyinka noocan oo kale ah ayaa ka caawiya sidii loo kordhin lahaa joogitaankaaga internetka ilaha warbaahinta oo la isku hallayn karo oo lagu dhisaayo fursada tiknoolajiyada tayo sare leh oo sidoo kale kordhin kara natiijooyinkaaga khayraadka.
Marka ay timaaddo tartan weyn oo ku saabsan natiijooyinka raadinta maxaliga ah, waxaa lagugula talinayaa ganacsiyada yaryar waxay leeyihiin farsamooyin sax ah oo ay ku dabbaqi karaan si ay u hagaajiyaan natiijooyinka raadinta. Dhammaan talooyinka kor ku xusan waxaa loo isticmaali karaa si loo kordhiyo joogitaanka boggaaga. Haddii aad u baahan tahay inaad ku darto qaar ka mid ah xirfadaha kale ee liiska, la xiriir kooxda Semtalkeena. Waxaan jeclahay inaan maqalno fikradahaaga!